विराटनगर आँखा उपचारको केन्द्र बन्दै - नेपालबहस
अञ्जना पराजुलीः रासस
| १४:५४:३७ मा प्रकाशित
२३ पुष,विराटनगर । विराटनगर आँखा अस्पताल देशकै अब्बल आँखा अस्पतालका रुपमा चिनिएको छ । नेपाली मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारत, भुटान, बङ्गलादेश लगायतबाट पनि यहाँ बिरामी आउने गर्छन् ।
“आँखामा लाग्ने रोगकै कारण अहिले पूर्वाञ्चलका मानिसहरु बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ”, विराटनगर आँखा अस्पतालका प्रबन्धक कुमार प्रिठुले भने, “बरु बाहिरबाट उपचारकै लागि आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।” अन्य अस्पतालभन्दा धेरै सस्तो र गुणस्तरीय उपचार भएकाले पनि यस अस्पताल बिरामीको चाप बन्दै गएको छ । अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रबन्धक प्रिठूका अनुसार हजाराै मानिसलाई आँखाको नानी नपाएर अन्धो भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘आँखा दान महादान’ भन्ने नारा गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन् । आफू मरेपछि गरिने आँखा दानबारे आम नागरिक अझै पनि सचेत र जागरुक हुन सकेको छैन । त्यसैले अस्पतालले विभिन्न ठाउँमा गएर आँखा दानबारे जनचेतना फैलाउन खालका कार्यक्रम गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । सन् २०१९ मा अस्पताललाई पाँच जना व्यक्तिबाट १० वटा आँखाको नानी प्राप्त भएको प्रबन्धक प्रिठुले जानकारी दिए ।
विराटनगर महानगरपालिकास्थित पुरानो अस्पताल रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठानका डा भाष्कर झाले बन्दाबन्दीयता बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आँखाको उपचारका लागि अस्पतालमा अहिले दैनिक तीन सयको हराहरीमा बिरामी आउने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश मोरङ, सुनसरी र भारतका छन् । अहिले स–साना बालबालिकामा आँखाको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको डा झाको भनाइ छ ।
आँखा देख्न कम भएमा, आँखा धमिलो वा रातो हुँदै गएमा ,आँखाको गेडी दुखेमा उपचारका लागि तुरन्त नजिकको आँखा अस्पताल गएर उपचार गराउनुपर्ने आँखा विशेषज्ञ बताउँछन् । आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गमा कुनै पनि प्रकारको समस्या देखा परेमा लापार्वाही नगरी तुरुन्त आँखा अस्पतालमा गएर देखाउन डा झाको सुझाव छ । उनले समयमा नै उपचार गराएमा मोतिविन्दु, जलविन्दु निको हुने र अन्धो हुनबाट बच्न सकिने जानकारी दिए । उच्चरक्तचाप र मधुमेह रोग भएका बिरामीले कम्तीमा वर्षको एक पटक आँखा अनिवार्य रुपमा जचाउनुपर्ने डा झाको सल्लाह छ ।
अस्पतालमा विराटनगर, धरान, इटहरीबाट बिरामी आउने गरेको तापडिया आँखा अस्पतालको कर्मचारी दीपक मिश्रले बताए । अस्पतालमा अहिले ५० देखि ६० जना आँखाका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यो अस्पताल सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले डा स्वेता तापडिया गोल्छा आँखा अस्पतालमा काम गर्थे ।
आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन पाएकोमा डा. स्वेता तापडिया खुशी छन्, सन्तुष्ट पनि छन् । यद्यपि उनी चाहन्छन्, सरकारले पनि यस क्षेत्रमा थप सहयोग गरोस् । “जसरी प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी गाउँगाउँ पुग्न सफल भएको छ, त्यसरी नै सरकारले प्रत्येक अस्पतालहरुमा आँखा स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने मेरो चाहना छ”, उनले भने, “यसका लागि सरकारले आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न ठाउँमा आँखा बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार नेपालमा आँखाको नानीमा लाग्ने चोटपटककै कारण वर्षेनी धेरैले दृष्टी गुमाउने गरेका छन् । उनीहरुमा दृष्टी फर्काउने एक मात्र उपाय आँखाको नानीको प्रत्यारोपण हो । त्यसबाहेक, मोतियाविन्दुका कारण हुने अन्धोपना निवारणका लागि लेन्समा लगाएको कर हटाउनु पर्ने, चश्माको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने तथा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि अनिवार्य आँखा परीक्षण गर्न लगाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइने २१ मिनेट पहिले
पहिलो सन्तानपछि कति समयको अन्तरालमा अर्को जन्माउने ? ३ दिन पहिले
पुषमा कस्तो रह्यो सरकारको आम्दानी ? भर्खरै
सञ्चारगृहको विकास हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राउतकाे जोड ४ मिनेट पहिले
जिल्ला सहकारी संघ कास्कीको अध्यक्षमा सावित्रा कोइराला १२ मिनेट पहिले
लगानीको अवसरः आजदेखि हाइड्रो कम्पनीको साढे १४ लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीमा १८ मिनेट पहिले
हिमाली क्षेत्रमा बाँझो जमिनमा लोठसल्ला रोपणको तयारी २९ मिनेट पहिले
ललितपुर चेम्बर अफ कमर्शको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा शाक्य निर्वाचित ३० मिनेट पहिले
पोल गाडेको दुई वर्षसम्म पनि उज्यालोमा बस्ने सपना अलपत्र ५६ मिनेट पहिले
विभिन्न जिल्लामा ६ जना मृत अवस्थामा फेला ! ६ दिन पहिले
माघे संक्रान्तिको दिन थप ४०३ जनामा संक्रमण ३ दिन पहिले
काठमाडौंमा मोटी युवतीहरुको मोडलिङ अडिसन ४ दिन पहिले
प्रचण्ड–माधव समूह निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आयोग पुग्याे ६ दिन पहिले
नक्कली पीसीआर रिर्पोट बनाएर विदेश उड्दै, एयरपोर्टबाट ७ जना पक्राउ २ हप्ता पहिले
सनराइज बैंकको कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा भिवान्ता होटलमा विशेष छुट २ हप्ता पहिले
यी दुई लघुवित्तको साधारण सभा आइतवार हुँदै २ दिन पहिले
अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै २ दिन पहिले
फिस्टेल अस्पतालमा उपचारत तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु १ महिना पहिले
ईपीएललाई आईसीसी मान्यता ११ महिना पहिले
अख्तियारको ३० ‘स्टिङ अपरेसन’ : सहसचिवसहित अधिकृत पक्राउ २ महिना पहिले
सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा इञ्जीनियरसहित दुई पक्राउ २ महिना पहिले